Baabuloon waxay saxiixday heshiisyo cusub si ay u keento nolosha maareynta adduunka ilaa 350k, oo ay ku jiraan 250k nolosha daryeelka ku saleysan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Baabuloon waxay saxiixday heshiisyo cusub si ay u keento nolosha maareynta adduunka ilaa 350k, oo ay ku jiraan 250k nolosha daryeelka ku saleysan
Baabuloon maanta waxay qeexday dardarteeda socota, iyada oo ku dhawaaqday c.135k oo dheeri ah inay heli doonto daryeelkeeda ku saleysan qiimaha ku baahsan Mareykanka iyo UK iyada oo loo sii fidinayo gobollada Mareykanka ee dheeraadka ah, Georgia iyo Mississippi, iyo kobcin dheeraad ah oo ku baahsan California. Tan micnaheedu waxaa weeye iyada oo la isku daray qaabkeeda daryeelka qiimaha ku saleysan, Baabuloon 360 iyo shaqadeeda daryeelka aasaasiga ah, Baabuloon waxay maamuli doontaa c. 350k ayaa ku nool adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan 105k NHS GP at Hand lives, bilowga 2022. Baabuloon waxay ku celcelisay hannaanka dakhliga 2021 iyo 2022 Sebtember 15, 2021.
“Ballaarinta shaqadeennu waxay Baabil ka caawin doontaa inay sii waddo ujeeddada aan u leenahay inaan gaadhno bulshooyinka ay marin -u -helidda iyo awood -u -heliddu yihiin caqabadaha, si looga dhigo sinnaanta caafimaadka mid caadi ah,” ayuu yiri Aasaasaha & Maamulaha Baabuloon Cali Parsa. “Kobcinteenna daryeelka ku saleysan qiimaha waxay sii muujineysaa faa iidada qaab-dhismeed ee qaabkeenna dijitaalka-koowaad ah, kaas oo ka sii hormaraya qorshaha, dhammaan iyadoo la ilaalinayo daryeel caafimaad oo tayo sare leh.”
Baabuloon waxay kordhin doontaa tirada dadka Mareykanka ah ee loo adeego iyada oo loo marayo barnaamijkeeda daryeelka ku saleysan qiimaha iyada oo lagu daray 63k nolosha Georgia iyo Mississippi, sida taariikhda heshiiska. Tan waxaa sii kordhin doona 17k oo ku nool Kaliforniya bilowga 2022. Tani waxay ka dhigan tahay in bukaannadan Medicaid iyo Medicare ay waqti ka badan heli doonaan helitaanka 24/7 dhakhaatiirta daryeelka caafimaadka aasaasiga ah iyo kalkaaliyayaasha, awoodda helitaanka aragtiyo iyo taageero shaqsiyeed, iyo dhammaadka ilaa dhammaadka daryeelka, iyada oo ujeedadu tahay in lagu hoggaamiyo natiijooyin wanaagsan iyo kharashyada oo yaraada waqti ka dib.
Ballaarinta ugu dambeysay ee Mareykanka ayaa dhammaystiraysa kobaca caalamiga ah ee Baabuloon, iyada oo in ka badan 55K lagu daray dhowaan UK iyada oo lala kaashanayo Royal Wolverhampton NHS Trust oo ka sarraysa 105k iyada oo loo marayo NHS GP Practice, Babylon GP at Hand. Ballaarinta caalamiga ah ee Baabuloon 360 waxay sii asaasaysaa ururku inuu hoggaamiye u noqdo daryeel-digital-koowaad, daryeel qiime ku saleysan, oo la jaanqaada himiladii aasaaska shirkadda si loo siiyo daryeel la heli karo oo la awoodi karo qof kasta oo Dhulka jooga. Baabuloon waxay dib-u-habayn ku samaysaa sida daryeelka caafimaadka loo bixiyo qaab aad u sarraysa oo ujeeddadiisu tahay in la ilaaliyo caafimaadka dadka, iyadoo laga leexanayo qaab-adeeg-lacag-bixin oo hadda diiradda saaraya jirrada iyo dhibaatada.
Dhacdada ugu weyn ee 350K ee lagu daboolay adduunka oo dhan waxay ku soo beegmaysaa barta Baabuloon, iyada oo warbixinteedii H1 2021 ee dakhligeed ay daaha ka qaadday 472% kobaca dakhli sannadka, iyo $ 4.2B SPAC oo ay ku biireen Alkuri Global Acquisition Corp. . Iyada oo ah shirkad dadweyne ka ganacsata, Baabuloon waxay filaysaa in loo meeleeyo sidii loo sii dhisi lahaa jahawareerkii ay hore u gaadhay oo ay sii waddo dardargelinta iyada oo si dhakhso leh loo kobcinayo hawlgallada.